AR ghọrọ ihe dị adị na Apple | Esi m mac
AR ghọrọ ihe dị adị na Apple
Ọ bụ Javier Labrador | | iPad, iPhone, Noticias
Ọ bụ ihe nzuzo. Na otu n’ime ihe ndị kasị atụ anya ihe site na mmepe na-eji ọkụ nke Californian ika. Site na iwebata iOS 11, nke ekwuputara taa na mmemme WWDC 2017 na San José, ọtụtụ ndozi ga-adị na akpa ndị mmadụ gburugburu ụwa. Adị n'eziokwu ga-abụ otu ọzọ site ugbu a gawa.
Na nke a, ohere dị iche iche na-enweghị njedebe na-emeghe ugbu a, maka ndị mmepe na ndị na-azụ ahịa nke ika ahụ. Mgbanwe mgbanwe teknụzụ dị nso. Lelee foto ndị ahụ.
Ngosi nke egwuregwu Lego, ebe anyị nwere ike ịhụ iberibe niile mejupụtara Batmobile.
Ekele maka ike enyere iPhone na iPad na ahịa ugbu a, yana arụmọrụ nke iOS 11 nyere, site na iji igwefoto nke ekwentị anyị ma ọ bụ mbadamba anyị, anyị nwere ike iji teknụzụ a.
N'ihi nchikota zuru oke nke teknụzụ ọhụrụ a na ngwaọrụ niile dị ugbu a, eziokwu nke mebere ga-enwe nnukwu ikpo okwu n'ụwa ugbu a, dị maka mmalite ya na ndị ahịa niile. Site na nke a, Apple laghachiri ịgbanwe ahịa ahụ, na-akwalite iji teknụzụ dị ugbu a ruo ọtụtụ afọ.
Craig Federighi na-egwu egwuregwu Virtual Reality
Dịka ị pụrụ ịhụ, nkọ na nkwụsi ike nke ngwa ahụ zuru oke. Njikọ ahụ na sistemụ arụmọrụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ dị mma. O yiri ka anyị ga-anụ ụtọ teknụzụ a ọtụtụ na egwuregwu na ngwa ọdịnihu maka ngwaọrụ anyị.
Mgbe ah M na-ahapụrụ gị foto ole na ole nke ihe demo banyere Virtual Reality na Apple Keynote, dị ka mmemme mmeghe nke WWDC 2017 nke ga-ewe otu izu:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » AR ghọrọ ihe dị adị na Apple
10,5 iPad Pro rutere na nnukwu ndozi
New iMac Pro, anụ ọhịa ọhụrụ nke Apple